Global Voices teny Malagasy » Nankalazaina Ho Toy Ny Fandresen’ny Fahalalahan’ny Asa Fanaovana Gazety Ny Fanafahana Madiodio Ny Fiji Times Tamin’ilay Fiampangana Azy Ho Mpikomy Tao Oseania · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Jona 2018 16:42 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika nirinandrea
Sokajy: Oseania, Fiji, Fahalalahàna miteny, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, GV Mpisolovava
Nankalazain'ireo tompon'andraikitra sy mpanohana ny Fiji Times ilay Valim-pitsarana manafaka madiodio ilay gazety tamin'ny Fiampangana azy ho mpanankorontana. Sary avy aminà lahatsary tanaty Youtube nampiakarin'i Fijivillage CFL
Afaka madiodio  ny Fiji Times, sy ireo tomponandraikitra telo ao aminy, ary ilay mpanadihady hevitra tamin'ilay fitoriana napetraky ny fanjakana ao Fiji azy ireo ho mpanankorontana taorian'ny fanambaran'ny Fitsarana Avo fa ‘tsy meloka’ izy ireo araky ny didin'ireo mpanmpy telo avy ao amin'ny fitsarana.
Ny 27 Aprily 2016, ny Nai Lalakai, gazety teratany mpiseho isan-kerinandro, no namoaka taratasy avy amin'i Josaia Waqabaca izay niresaka ny filàna ny fampihavanam-pirenena eo amin'ireo vazimba teratany sy ireo vondrona miozolomana vitsy an'isa. Nai Lalakai dia rantsana ao amin'ny Fiji Times Ltd.
Roa volana taty aoriana, nisy fitoriana napetraky ny fanjakana tao Fiji miampanga an'i Waqabaca, ilay tonian'ny fanoratana ao amin'ny Nai Lalakai, Anare Ravula, tonian'ny famoahan-dahatsoratra ao amin'ny Fiji Times, Fred Wesley, sekretera jeneralin'ny Fiji Times, ny mpanonta sady tale jeneralin'ny Hank Art, ho mpitarika fifankahalàn'ny fiarahamonina . Nilaza ny governemanta fa “manosika ny fihetsehampo feno fankahalàna sy ny lolompo eo amin'ny miozolomana sy ny tsy miozolomana ” ilay lahatsoratra. Herintaona taty aoriana, novàna ho fitoriana noho ny fihantsiana ilay izy, ahazoana sazy famonjàna hatramin'ny fito taona farafahabetsany.
Ny 18 May 2018, nanome rariny  ny voampanga ireo mpanampy telo tao amin'ny fitsarana. Andro efatra taty aoriana, nohamafisin ‘ilay Mpitsara avy ao amin'ny Fitsarana Avo, Thushara Rajasinghe izany, tamin'ny nilazany fa tsy vitan'ny fampanoavana ny nanaporofo lavidavitra kokoa ny ahiahy ny maha-mpandrisika sy maha-mpanatanteraka fanakorontanana ny voampanga.
Nankalazain'ireo vondrona mpanaramaso ny filazambaovao ao amin'ny faritra sy manerana izao tontolo izao ho toy ny fandresen'ny fahalalahan'ny fanehoankevitra ao Fiji iny valim-pitsarana iny. Maro no mihevitra fa ny Fiji Times no filazambaovao farany tsy miankina ao amin'ny firenena nahitàna fingampingana teo amin'ny fanehoankevitra malalaka hatramin'ny nandraisan'ny tafika ny fahefana tamin'ny taona 2006. Nisy fifidianana ny taona 2014 saingy mbola nijanona ihany ny fandrahonana  ny fahalalahan'ireo filazambaovao.
Ho fanehoankevitra amin'ilay didim-pitsarana, nilaza i Art fa hanohy  hanatanteraka ny iraka efainy hatrany ilay gazety :
Tokony hamporisika antsika hanohy ny làlantsika tahaka ny efa nataontsika izany, mitoetra ao anatin'ny lalàna sy ny fahamendrehana kanefa mitatitra amin'ny fomba mazava sy voalanjalanja tsy misy tahotra.
Notsindrian ‘i Wesley fa tsy miasa hanome vàhana ny fanjakana na hanohitra ny fanjakana ny gazety :
Hanohy hiezaka ny hijanona hifikitra amin'ny idealin’ ny asa fanaovana gazety tsara izahay.
Tsy mpomba ny governemanta, ary tsy mpanohitra ny governemanta ihany koa izahay.
Miezaka izahay hametraka sehatra iray ahafahan'ny olona, na inona na inona fironana ara-politikany, haneho ny maharary azy ireo.
Aman Ravindra-Singh, mpisolovava an'i Waqabaca, no nanazava  ny maha-zava-dehibe iny didim-pitsarana iny :
Fandresena ho an'ny fahalalahana hiteny sy haneho hevitra ary zo hanana fahalalahana miteny sy haneho hevitra ho an'ny vahoakan'i Fiji iny.
Miharihary izao fa mbola manohy ny fiampangany ny olona ho mpanakorontana ihany ny fanjakana ao Fiji mba hanafoanana ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fanoherana ara-politika. Fandresena goavana ho an'ny mponina ao Fiji ity tranga manokana ity sy ny valiny.
Nampahatsiahy  ny governemanta ny Fijian Media Association na ny Fikambanan'ny Filazambaovao Fijiana fa misy fomba hafa hanitsiana ny hadisoan'ireo Filazambaovao ankoatry ny fampiakarana fitsarana :
Mbola mamerina manao antso amin'ny Fanjakana hatrany izahay hampihatra ireo fepetra sy hampiasa ny rafitra araky ny voalaza ao amin'ny Didim-panjakana nivoaka ny taona 2010 mikasika ny Fampandrosoana Ny Orinasan-Tserasera – izay manambara fa ny olona manana fitaraina atao amin'ny fikambanan'ny filazambaovao dia tokony handefa ny fitarainany any amin'ny Media Industry Development Authority (MIDA) na ny Tomponandraikitry ny Fampandrosoana Ny Orinasan-Tserasera mba hamahàna ilay olana voalohany aloha. Tokony ho dingana farany ny fampiakarana fitsarana.
Nandritra izany fotoana izany, nasongadin'ny  Pacific Islands News Association ny fiantraikan'ilay didim-pitsarana tany amin'ny faritra:
Tsy zava-dehibe ho an'ny Fiji Times irery ihany ilay fanapahankevitra, fa ho an'ny haino aman-jery rehetra ao Fiji sy ny faritra manerana ny Pasifika ihany koa. Miarahaba ny mpiara-miasa aminay ao amin'ny Fiji Times izahay noho ny fahavitrihany sy ny fahavononany hiady sy hiaro ny fahalalahan'ny filazambaovao ary ny demokrasia ato amin'ny faritra misy anay nandritra ny roa taona lasa .
Hampakatra  ilay didim-pitsarana navoakan'ny Fitsarana Avo ny biraon'ny Fampanoavana ao Fiji.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/26/120145/
 Afaka madiodio: https://cpj.org/2018/05/fiji-charges-newspaper-journalists-with-sedition.php
 nanome rariny: http://www.pmc.aut.ac.nz/pacific-media-watch/fiji-fiji-times-four-relieved-sedition-newspaper-freedom-ordeal-over-10167